FAALLO: Sidee lagu mideyn karaa Aragtiyaha Dowladda Federalka iyo Maamul-gobaleedyada ? – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Inkastoo ay Siyaasiyiinta DFS iyo Maamul-gobaleedyadda ku mideysnayn Aragiyo badan oo qeyb ka ah Danaha Qaranka ayaa waxaa haddana la isweydiin karaa Sidee loo mideyn karaa Aragtidooda kala jaanka ah?
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan inay Siyaasadda Somalia haatan taagan tahay Figtii ugu khatarta badnayd, marka loo eego Deganaanshihii Siyaasadeed ee ay Dowladihii hore ku soo waayo qaateen.
Waana Dhab in Madaxda DF iyo kuwa Maamul-gobaleedyadda ku kala aragti duwan yihiin qoddobo muhiim ah, balse waxaa aad indhaha loogu hayaa Milanka Khilaafka Khaliijka ee loo soo xawilay Geeska Afrika.
Khilaafka Khaliijka ayaana laga digay inay saamayn khatar leh ku yeelan karo Mustaqbalka Dowladeed, Iskaashiga DFS iyo Maamul-gobaleedyadda, iyadoo ay muuqdaan raad-raacyo sugan oo lagu kala taageerayo dalalka ku lugta leh Khilaafka Khaliijka.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan inaysan Siyaasiyiinta Xilligan doonaynin inay si qoto dheer uga doodaan saamaynta Khilaafkaasi, si loo helo Midnimo Siyaasadeed oo la isaga moosi karo cawaaqib-xumida ka dhalan karta Khilaafka Khaliijka.
Aragtiyaha Qunyar-socodka ayaana ku fasiraya Kooxeysiga Khilaafka Khaliijka inay udub-dhexaad tahay Dhaqaalaha Siyaasadeysan ee ay Dowladaha Carabta ee is-khilaafsan ugu deeqaan Madaxda Soomaalida ee iyaga kala taabacsan.
Mowqifka Madaxda Dowlad-gobaleedyadda waxay ku taageereen Sacuudiga iyo Imaaraadka, sida laga dareemi karo Socdaalka Dufanaysan ee ay ku tagaan dalalkaasi.
Inkastoo ay DFS ka qaadatay mowqif dhexdhexaadnimo Khilaafka Khaliijka, haddana Siyaasiyiinta Muxaafidka iyo kuwa Mucaaradka waxay far ku go’deen Dhexdhexaadnimadda DFS, kuna tilmaameen Xeellad Siyaasadeed Casriyeysan oo uu dhabarku muuqdo, waa sida ay hadalka u dhigaan.
Haddaba, waxaa isweydiin mudan Madaxda Qaranka iyo kuwa Maamul-gobaledyadda maxay u kari la’ yihiin inay Mowqif Mideysan ka qaataan Khilaafka Khaliijka, si looga badbaado Khataraha Khilaafka Khaliijka ee xilliga dhow iyo kuwa Waqtiga dheer.
Si kastaba ha ahaatee, haddii ay DFS iyo Madaxda Dowlad-gobaleedyadda iska indha tiraan Khatarta Khilaafkaasi, kana meermeeraan inay ka heshiiyaan Arrintaasi, waxaa la filan karaa Deganaansho La’aan Siyaasadeed iyo in la baylihiyo Danaha iyo Asaaska Badbaadada Qaranka iyo in Somalia loo soo xawilo Dgaal nooc cusub xambaarsan.
Kalluumeysato u dhalatay dalka Iiraan oo la sii daayey.